Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.5.5 Nwee usoro ziri ezi
Mgbamume nke ịbụ ụkpụrụ ziri ezi na-emetụta nchọpụta niile a kọwara n'akwụkwọ a. Na mgbakwunye na ụkpụrụ omume kachasị elu-nke a tụlere n'isi nke 6 - ụfọdụ okwu gbasara okwu gbasara ihe gbasara usoro mmekọ ọnụ, na ebe ọ bụ na ngwakọta aka na-adị ọhụrụ maka nchọpụta mmadụ, nsogbu ndị a nwere ike ọ gaghị apụta ìhè na mbụ.
N'ime ọrụ mmekọrịta niile, nsogbu na akwụmụgwọ dị mgbagwoju anya. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị na-ewere ya na ọ bụ enweghị echiche na ọtụtụ puku mmadụ na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ na Netflix Prize ma emesị enwetaghị ụgwọ. N'otu aka ahụ, ụfọdụ ndị na-ele ya anya dị ka ihe na-enweghị isi iji kwụọ ụgwọ ọrụ ego maka ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ahịa na-arụ ọrụ na microtask. Na mgbakwunye na nsogbu ndị a, e nwere ihe ndị ọzọ metụtara akwụmụgwọ. Kwesịrị ka ndị niile sonyere na mmekorita ọnụ na-ede akwụkwọ ndị ọkà mmụta sayensị ahụ? Ọrụ dị iche iche na-ewebata ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ ọrụ na-enye ndị mmadụ niile aka ha na-emekọ ihe ọnụ; dịka ọmụmaatụ, onye ikpeazụ na-ede akwụkwọ mpịakọta mbụ bụ "Ndị na-eme ihe nchekwa" (Cooper et al. 2010) . Na Galaxy Zoo ezinụlọ nke oru ngo, ndị na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ dị mkpa na mgbe ụfọdụ a gwara ka ịbụ ndị nduzi na akwụkwọ. Dịka ọmụmaatụ, Ivan Terentev na Tim Matorny, ndị abụọ na-akpọ Radio Radio Zoo, bụ ndị na-eduzi ha n'otu n'ime akwụkwọ ndị sitere na ọrụ ahụ (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) . Mgbe ụfọdụ, ọrụ ụfọdụ na-anabata onyinye n'enweghị onye nkwado. Mkpebi banyere ịgba chaa chaa ga-adị iche site na ikpe ruo ikpe.
Oku a na-akpọ na kesaa kuki data nwere ike ịjụ ajụjụ dị mgbagwoju anya gbasara nkwenye na nzuzo. Dịka ọmụmaatụ, Netflix tọhapụrụ ndị ahịa ahịa fim na onye ọ bụla. Ọ bụ ezie na ọkwa fim nwere ike ọ gaghị adị nro, ha nwere ike ịkọwa ozi gbasara mmasị ndị ahịa ma ọ bụ ịlụ mmekọ, ozi ndị ahịa anaghị ekweta ime ọha. Netflix gbalịrị ịdebanye aha data ahụ ka o wee nwee ike ghara ịkọrọ ndị ọ bụla kpọmkwem, ma izu ole na ole mgbe ntọhapụ nke Netflix data gasịrị, Arvind Narayanan na Vitaly Shmatikov (2008) (lee isi 6). Ọzọkwa, na nchịkọta data nchịkọta, ndị nyocha nwere ike ịnakọta data gbasara ndị na-enweghị nkwenye ha. Dịka ọmụmaatụ, na Akwụkwọ Malawi Journals Projects, mkparịta ụka banyere otu okwu dị nro (AIDS) ka edepụtara na-enweghị nkwenye nke ndị na-eso ya. O nweghị otu n'ime nsogbu ndị a na-apụghị imeri emeri, ma a ghaghị ịtụle ha n'otu oge nke ọrụ. Cheta, "igwe" gị bụ ndị mmadụ.